ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ် ဖင်လန်နိုင်ငံပညာရေးစနစ် | အိမ့်မှူးသော်
ဖင်လန်မှာ ဥရောပတိုက် မြောက်ပိုင်း၊ ဘောလ်တစ်ပင်လယ်အနီးရှိ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဖင်းနစ်ရ်ှနှင့် ဆွီးဒစ်ရ်ှဘာသာစကားများ ပြောဆိုကြည်သည်။ ငွေကြေးအားဖြင့် ယူရိုငွေကို သုံးစွဲကြသည်။ မြို့ တော်မှာ ဟယ်လ်ဆင်ကီ ဖြစ်သည်။ လူဦးရေ (၅) သန်းကျော်ရှိသည်။ တရားဝင်သုံးစွဲသည့်နိုင်ငံအမည်မှာ ဖင်လန်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဧရိယာစတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၁၃၀၅ ဒဿမ ၅၉ မိုင် ကျယ်ဝန်းသည့် နိုင်ငံဖြစ်သည်။
ဖင်လန်နိုင်ငံဟာ ပညာရေးမှာ ထိပ်ဆုံးအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းခံရပြီး၊ သင်္ချာမှာတော့ တောင်ကိုရီးယားကို နည်းနည်းလေးကပ်ရှုံးပြီး ဒုတိယသင်္ချာ အကောင်းဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာပညာရေးဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ် (၁၀၀) ကျော်လာပြီး ဖင်လန်နိုင်ငံစနစ်ကို လေ့လာကြရသည်အထိ နာမည်ကျော်ခဲ့တယ်။ ယခု ဒီဆောင်းပါးကလည်း အဲဒီလေ့လာသူတွေထဲက အမေရိကန်နိုင်ငံ ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်ရဲ့  သူမြင်တဲ့ ဖင်လန်နိုင်ငံ ပညာရေး စနစ်ကို တင်ပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖင်လန်နိုင်ငံပညာရေး ကောင်းခဲ့တာလည်း မပြောနဲ့လေ၊ ကမ္ဘာ့ပညာရေးအတွက် ငွေကြေးအများဆုံးသုံးတဲ့နိုင်ငံလေးနိုင်ငံထဲမှာ စာရင်းဝင်တယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာဆိုရင် ဒေသဆိုင်ရာ မူလတန်းနဲ့ အထက်တန်းကျောင်းတွေ အတွက် ပညာရေးအသုံးစရိတ်အဖြစ် သတ်မှတ်တဲ့ငွေကြေးပမာဏက ဒေါ်လာသန်း ၃၇၀ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံတော်ကရတဲ့ အခွန်ငွေတွေအပေါ်ကနေ ပညာရေးအတွက် အကောင်းဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်မှုလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။
OECD နိုင်ငံတွေမှာ PSIA ဆိုတဲ့ စာမေးပွဲကို စံတစ်ခုအနေနဲ့ သတ်မှတ်ပြီး ကျင်းပပေးတယ်။ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု အထက်တန်းကျောင်းအဆင့် စာမေးပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပညာရေးဌာနကနေ စစ်ဆေးပေးတယ်။ ဒီစစ်ဆေးမှုမှာ ဖင်လန်နိုင်ငံက ထိပ်တန်းစာရင်းဝင်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဖင်လန်နိုင်ငံမှာ မူကြိုအဆင့်အတန်းကို အသက် ၆နှစ်မှ စတတ်ရတယ်။ မူကြိုမှာ စာမသင်ဘူး။ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်အောင်ထားတယ်။ ပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ပေးတယ်။ မူကြိုပြီးတဲ့နှစ်ကနေ နောက် ၉ နှစ်တိတိ အခြေခံပညာကို သင်ကြားကြရတယ်။ ၉တန်း ၁၀ တန်း အဆင့်အောင်ပြီးရင် အဆင့်မြင့်တန်း (upper secondary school) ကိုဆက်တက်ချင်ရင်တက်၊ ဒါမှ မဟုတ် အသက်မွေးမှုကျောင်းတွေကို ၃ နှစ်သွားတတ်လို့ရတယ်။
အသက်မွေးမှုကျောင်းတွေကလည်း ပေါ့ပျက်ပျက်တော့ မအောင်ဘူး။ လုပ်ငန်းခွင်အထိ ရည်ရွယ်ထားတာတွေဖြစ်လို့ ကျောင်းသင်ပြဋ္ဌာန်းစာရော၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေရော လေ့လာကြရတယ်။ အထက်တန်းနဲ့ အဆင့်မြင့်တန်းတွေပြီးရင် တက္ကသိုလ်ကို မာစတာဘွဲ့အတွက်ဖြစ်စေ၊ PhD ဘွဲ့  အတွက်ဖြစ်စေ တက်ဖို့သွားကြသလို၊ အသက်မွေးမှုကျောင်းတွေကလည်း ပိုလီတက်ကနစ်ကောလိပ်တွေကို သွားတတ်ကြတာများတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ဘက်ချလာဘွဲ့  တစ်ခုခု သို့မဟုတ် မာစတာဘွဲ့ တွေအတွက် သွားတက်ကြတယ်။
ဖင်လန်နိုင်ငံမှာ အသက်၂၅ နှစ်လောက်ရောက်မှ ဘွဲ့ ရကြတာများတယ်။ တချို့ နိုင်ငံတွေမှာက ဘဝတစ်သက်တာပညာရေးတွေဆိုပြီး ပြောနေပေမယ့် ဖင်လန်နိုင်ငံသားတွေကတော့ ပညာသင်ကြားရေးဟာ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့  အခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတာကြောင့် အရွယ်ရောက်လာရင်ပညာတတ်တွေ ဖြစ်သွားကြတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် အသင့်အနေအထားမှာ ရပ်တည်နိုင်သူတွေချည်းဖြစ်ပြီး ပညာတတ်ပေါများတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတယ်။ သူတို့ ရထားတဲ့ဘွဲ့ တွေဟာ သူတို့ဘဝအတွက် သူတို့အသက်မွေးမှုလုပ်ငန်းတွေအတွက် အသင့်ဖြစ်နေကြတယ်။
ဖင်လန်နိုင်ငံက ဆရာတွေဟာ စက်မှုဖွံ့ ဖြိုးတိုးတတ်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေက များတယ်။ ပညာပေးမယ့် ဆရာတွေဟာ ပညာရေးမှာ လေးစားစရာကောင်းလောက်အောင် ဘွဲ့ ထူး ဂုဏ်ထူးတွေနဲ့ ပြည့်စုံကြတယ်။ ဆရာတွေဟာ ဆရာအတတ်ပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း သင်တန်းတွေတက်ရောက်ခဲ့သူတွေဖြစ်ရတယ်။ ကျောင်းဂုဏ်နဲ့လိုက်အောင် ဆရာတွေကလည်း ကိုယ့်ဂုဏ်သိက္ခာကို အရည်အချင်းအစွမ်းပြပြီး လိုက်ပြိုင်ပြရတယ်။ ဖင်လန်နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံတော်ကနေ ဂုဏ်ပြုသတ်မှတ်ခံရတဲ့ဆရာတွေဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြကြရတယ်။
ဖင်လန်နိုင်ငံ ပညာရေးစနစ်မှာ ဘွဲ့ ရပြီး မာစတာ ဆက်တတ်ခွင့်ရတဲ့ကျောင်းသားတွေဟာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းပြန်ပြီးဆရာလုပ်ခွင့်ရတယ်။ သူတို့ဘာသာရပ်နယ်ပယ်မှာ သင်ကြားရင်း လေ့လာပြန်ပြီး ပညာရှာကြရတယ်။ မာစတာတန်းဆက်တတ်ဖို့ မမီတဲ့သူတွေကတော့ အထက်တန်း၊ မူကြိုတန်းတွေမှာ ပြန်ပြီးဆရာလုပ်နိုင်တယ်။
ဖင်လန်နိုင်ငံက မိဘတွေဟာ ပညာရေးသည်သာ သူတို့သားသမီးတွေအတွက် အရေးအပါဆုံးလို့လက်ခံထားကြတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဆရာတွေကို အလေးထားကြတယ်။ မိဘနဲ့ဆရာတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်သားမီးက ကျောင်းမှာ ညံ့လာရင် သူတို့မှာပဲ တာဝန်ရှိတယ်လို့ လက်ခံထားကြတယ်။ ဒါကြောင့် ညံ့တဲ့ကလေးတွေအတွက် အပြစ်ကို ခံယူစရာရှိရင် မိဘနဲ့ဆရာတွေကသာ ခံယူကြမယ်လို့ သဘောတူထားကြတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာတွေက ကျောင်းမှာ ကိုယ့်ကိုအပ်နှံထားတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ကောင်းကောင်းသင်၊ လမ်းမှန်ညွှန်ပြ ဂရုစိုက်ကြရတယ်။
မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း ကိုယ့်သားသမီးက သင်္ချာရမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ အိမ်ပြန်လာမှ ဆရာတွေကို အသိအမှတ်ပြုကြတယ်။ သူတို့နိုင်ငံမှာက သူတို့သားသမီးတွေရဲ့ အနာဂတ်ကို ဆရာတွေ အပေါ် လုံးဝပုံအပ်ထားကြသလို၊ ဆရာတွေကလည်း ယုံမှတ်ပြီး ပုံအပ်ချင်စရာ စိတ်ဓာတ် ပညာအခြေခံတွေ ကောင်းကြတယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့ သူတို့သားသမီးတွေရဲ့ ပညာရေးလိုအပ်ချက်တွေကို ဆရာတွေကသာ ဖြည့်ဆည်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်း မှတ်ယူထားကြတယ်။
ဖင်လန်နိုင်ငံမှာ ကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်က ဆရာတွေအပေါ် အလွန်လေးစားရိုသေကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာတွေကိုတော့ နာမည်ကိုပဲခေါ်ပြီး ဆက်ဆံကြတယ်။ ဆရာနဲ့ကျောင်းသား နေ့လည်စာအတူစားကြတယ်။ ကလေးတွေအတွက် နေ့လည်စာကို ကျောင်းတွေက အခမဲ့ကျွေးကြတယ်။
သူတို့နိုင်ငံမှာ ၅ တန်း မရောက်မချင်း ကလေးတွေကို အဆင့်ပေးပြီး သတ်မှတ်တာမရှိဘူး။ ၄တန်းအထိ ကလေးတွေရဲ့ ပညာရည်တိုးတက်မှုကို ဆရာတွေကပဲ ပိုင်းဖြတ်သွားရတယ်။ ကျောင်းစာသင်နှစ် နောက်ဆုံးမှာ စာမေးပွဲတစ်ခုစစ်ပေမယ့် အဲဒီ စာမေးပွဲကရလဒ်ကို ကျောင်းသားတွေ လည်းမသိရဘူး၊ မိဘတွေလည်း မသိရဘူး။ ဒီစနစ်က ကလေးတွေကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုပိုပြီးရှိလာစေဖို့နဲ့ အထင်ကြီးလာစေနိုင်တယ်လို့ ယူဆထားကြတယ်။
တကယ်လို့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဟာ ပညာရေးမှာထူးချွန်လာရင် ပညာသင်ဆုတွေပေးတယ်။ ဆရာတွေက သားသမီးအပေါ် ဘယ်လိုပဲပိုင်းဖြတ်သည်ဖြစ်စေ အရည်အချင်း ပြည့်ဝသူတွေလို့ လက်ခံထားကြတဲ့အတွက် သူတို့မှာ မိဘတွေနဲ့ ပြဿနာဖြစ်စရာလည်း မလိုကြဘူး။ ဆရာတွေက တစ်ပတ်တစ်ခါ စုဝေးပြီး ကျောင်းသားတွေအရေး ဆွေးနွေးလေ့ရှိကြတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်တွေကို ဒီအစည်းအဝေးမှာ ပြောကြတယ်။ အထူးသဖြင့် ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေမှာ ဒီစနစ်ကို အစိုးရကျောင်းတွေထက်ပိုပြီး ဂရုစိုက်လုပ်လေ့ရှိကြတယ်။
ဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးမူဝါဒမှာ နိုင်ငံတော်က တာဝန်ပေးရတဲ့ စာမေးပွဲစနစ်ရှိတယ်။ ကိုယ့်ကျင့်တရားနဲ့ ပြည်သူ့နီတိကို သင်ရိုးညွှန်းတမ်းထဲမှာ ထည့်ပေးထားတယ်။ ဆရာက ကိုယ့်အတန်းကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ဒီနှစ်မှာ သွားမယ်ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်းဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိတယ်။ ဘယ်လို သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေထားမယ်၊ ဘယ်လိုစာအုပ်တွေထားမယ်ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်။ ဖင်လန်မှာ ဖင်းနစ်ရ်ှစကားနဲ့ ဆွီးဒစ်ရ်ှစကားတွေကို ရုံးသုံးအဖြစ်သတ်မှတ်တယ်။ ပုံမှန်ကတော့ ဖင်းနစ်ရ်ှစကားပဲ ပြောလေ့ရှိပေမယ့် အင်္ဂလိပ်၊ ဂျာမန်၊ ပြင်သစ်၊ ရှရှား စကားတွေလည်း ပြောကြတယ်။
သူတို့ကျောင်းတွေမှာ လှပအောင်ပြင်ဆင်မွန်းမံထားကြတယ်။ အေးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လို့ ထမင်းစားခန်းနဲ့ ဧည့်ခန်းတွေမှာ မီးဖိုကြီးတွေထားပေးထားတယ်။ ကျောင်းဆိုတာ ကလေးတွေအတွက် နေချင်စရာ ပျော်ရွှင်တဲ့ကမ္ဘာလေးတစ်ခုဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးထားတယ်။ ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရိုင်းပြတဲ့ အပြုအမူအပြောအဆို ကျင့်ကြံနေထိုင်မှုတွေလည်း မရှိကြဘူး။ ကျောင်းမှာပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်တာ မိဘတွေကိုပါ ဂယက်ရိုက်သွားနိုင်တာကြောင့် အရမ်းကို ဂရုစိုက်လေ့ရှိတယ်။
အိမ်စာဆိုတာ မဆိုစလောက်တွေပဲ လုပ်ကြရတယ်။ ကျောင်းလာတယ်ဆိုတာ ပျော်ပျော်ပါးပါး၊ ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ ပညာလာရှာကြတာလို့ သဘောထားကြတယ်။ ကျောင်းမှ သင်ကြားချိန်ကလည်း နည်းတယ်။ အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွေထက် ဆရာတွေက ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် အလုပ်သက်သာတယ်လို့ တောင်ပြောကြတယ်။
ကျောင်းအုပ်ကြီးဆိုတာ ကိုလည်း ပညာအခြေခံကောင်း သူတွေကိုပဲ ခန့်လေ့ရှိတယ်။ ကျောင်းအုပ်ဆိုတာထက် general manager လို့ သဘောထားကြတယ်။ တစ်ကျောင်းလုံး ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စားသောက်ရေး၊ သင်ကြားရေးအားလုံးကို လိုက်ပြီးတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရတယ်။ ကလေးတစ်ယောက်ညံ့ရင် ဆရာအားလုံးတာဝန်ယူရတယ်။ သူတို့တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့ အစည်းအဝေးမှာ အဲဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး တင်ပြဆွေးနွေးကြတယ်။ ပိုပြီးတော်တဲ့ ကောင်းတဲ့ အတန်းကိုဖြစ်စေ၊ ကျောင်းကိုဖြစ်စေ ပြောင်းပေးကြတယ်။ အဲဒီမှာသင်တဲ့ဆရာတွေကလည်း တကယ့်အတော်ဆုံးဆရာတွေ ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ကျောင်းသား၊ ဆရာ၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးတွေရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ ဘာမှအဟန့်အတား အဆီးအတားတွေမရှိဘူး။ ပွင့်လင်းစွာဆက်ဆံပြောဆိုကြတယ်။
ဖင်လန်မှာ ဆရာတွေလစာကောင်းတယ်။ အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာ ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်နာရီဝင်ငွေဟာ ဒေါ်လာ ၄၅ နဲ့ ၅၀ ရှိတယ်။ အထက်တန်းပြဆရာတွေဆိုရင် တစ်နာရီကို ဒေါ်လာ ၇၅ ကနေ ၈၀ အထိရကြတယ်။ စာသင်ခန်းတစ်ခန်းကို ကျောင်းသား ၁၈ ယောက်ကနေ ၂၀ အထိပဲ သင်ကြားရတယ်။
သူတို့နိုင်ငံက လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားတာကြောင့် ပညာသင်စရိတ်ဟာ သူတို့အတွက် အလွန်သက်သာတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်။ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေဟာ ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုကနေ လွတ်ကင်းကြတယ်။ ကျောင်းတွေကို အကောင်းဆုံးမွမ်းမံပြင်ဆင် ထူထောင်ထားကြပြီး သင်ကြားတဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေါ် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာလည်း ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်ပေးထားတယ်။ ဖင်လန်နိုင်ငံ ပညာရေးဝန်ကြီး ဟန်နာ ဗတ်ကူနန်ကတော့ သူတို့နိုင်ငံက လူတော်တွေထွက်တာကို ဘယ်လိုဂဏ်ယူပြီး ပြောသွားသလဲဆိုရင်….
“ကျွန်မတို့ဖင်လန်နိုင်ငံပညာရေးစနစ်က တကယ်တော်တဲ့သူတွေကို တကယ်ချီးမြှောက်တယ်။ ခုဆိုရင် ဘာသာရပ်အလိုက် ထူးချွန်သူတွေကို ဘယ်လို အထောက်အကူပေးရမလဲဆိုတဲ့ ရှေ့ ပြေး စီမံချက်တွေကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်နေပြီ” လို့ ပြောဝံ့တဲ့အနေအထားကို ရောက်နေပြီ "
စာရေးသူ= Ashin Sutacara
လမင်းငယ် 5:11 PM
သူရောရာနဲ့ သူ့ ပေါ့ကွယ်
It'sashame you don't haveadonаte button! I'd definitely donate to this outstanding blog! I suppose for now i'll
settle foг bоοk-mаrkіng anԁ adding уоur RSS fеed to my Goоgle account.
I looκ forwагd to fгesh uρdates аnԁ will talκ аbout thіs blog ωith my Facebook group.
Also visіt my site :: Http://Iphonerepairkl.Xanga.Com/
Here is my blog post ... iphone repair
I don't even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don't knοω whο уou
are but dеfinitеly уοu arе gοing toafamοus bloggег іf you аren't already ;) Cheers!
Here is my web-site :: iphone repair kl
With haѵin so much contеnt аnd articles dο you eνеr run into any issues of plagoriѕm
оr сοpугight іnfringеment?
Му blog has а lοt οf unique сontent
I've either created myself or outsourced but it looks likealot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any methods to help reduce content from being stolen? I'd
genuinely apρreciate it.
Τakealook at my web-site - iphone repair malaysia
Nice answer bacκ іn return of this
quеry wіth fiгm arguments
and ԁеscribіng all about thаt.
Hеre is my ωеb blog - iphonefix
Hey very nice site!! Man .. Eхcеllent .
. Wondеrful .. I'll bookmark your site and take the feeds additionally? I am glad to seek outalot of helpful info here in the submit, we need develop more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .
My web page - iphone battery
I love reading thгough an article that will makе men and women think.
Also, thanks for аllowing me to comment!
Feel free to surf to my web blοg; ifix4you - ios 5.1.1 jailbreak
Also see my website: ifix4you - ios 5.1.1 jailbreak
This deѕign is wіcked! Yοu definitely know hoω to κeepareader entertainеd.
Betωeеn your ωit anԁ yοur vidеos, I waѕ
..HaHa!) Eхcеllent jоb. I rеally loved what you had tο say, and mоre thаn
that, how you рreѕented it. Tοo cool!
Μу web page :: iphone2fix
This exсellent ωebsite cеrtainly has
all the info I wanted abоut this subject аnd
Also visit my weblog: ipad repair malaysia
I'm really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is thisapaid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it's rаrе
to seеanice blog like this оne todаy.
Feеl free tо vіѕit my web blog:
Attгactivе part of content. I just stumbled upon your web sitе and in accеssion capіtal to аssert thаt I acquire aсtuаllу loved acсount yοur blοg posts.
Anywaу I ωill be ѕubscribing to your augment anԁ eνеn
I fulfillment you get right of entry to peгsistently fast.
Feel free to vіsit my webρage Ipad repair bangsar
When sοme onе ѕeаrches for his eѕsеntіal thing, therefore he/ѕhе wants tо bе aѵаilable
that in dеtail, thus that thing is maintaіnеd oνer
My web sіte; http://www.zootoo.com/profile/imacrepairmalaysia/blog/entry/economicalimac2012repairmalays
When sοme one sеаrсhes for his essential thing, thereforе he/she wants to be available that in ԁetаil, thus that thing iѕ maintaineԁ оνеr here.
Fеel free to νіsit my page http://www.zootoo.com/profile/imacrepairmalaysia/blog/entry/economicalimac2012repairmalays
Incredіble poіnts. Grеat arguments.
Keep uρ the good woгk.
Fеel free tо visіt my websitе bluehost wordpress bluehost email
I thіnk that you should writе more abоut this
topic, it might nοt beataboo matteг but uѕuallу
folks don't discuss such subjects. To the next! Cheers!!
Stop by my page - iphone repair